Ukuguqulwa kwe-Ultrasonic Particle for HPLC Columns - Hielscher Ultrasound Technology
Izinselele ku-HPLC zihlukaniswa ngokusheshisa nangokusebenzayo kwamasampuli amaningi.
I-Sonication ivumela ukuthi iguqule futhi isebenze izinhlayiya ze-nano, isb. Silica noma i-zirkonia microspheres.
I-Ultrasonication iyindlela ephumelela kakhulu yokwenza izinto eziyinhloko ze-shell-silica ze-silica, ikakhulukazi zekholomu ze-HPLC.
Ultrasonic Ukuguqulwa of Silica Particles
Isakhiwo sezinhlayiyana kanye nosayizi wezinhlayiyana kanye nosayizi we-pore nokucindezela kwepompo yiyona imingcele ebaluleke kakhulu ethonya ukuhlaziywa kwe-HPLC.
Iningi lamasistimu e-HPLC agijima ngesigaba sokusebenza esisebenzayo esihlanganiswe ngaphandle kwezinhlayiyana ezincane ze-silica ezincane. Izinhlayiya ubuhlalu obuncane kakhulu emkhatsini we-micro- nano-range. Ubukhulu bezinhlayiya zobuhlalu buhluka, kodwa ubukhulu bezinhlayiya ze-approx. 5μm ivame kakhulu. Izinhlayiya ezincane zihlinzekela indawo enkulu futhi ihlukaniswe kangcono, kodwa ukucindezela okudingekayo kukhulume ngokunyuka kwe-particle diameter square. Lokhu kusho ukuthi ukusebenzisa izinhlayiya zesigamu sesayizi nobukhulu bekholomu efanayo, kabili ukusebenza, kodwa ngesikhathi esifanayo ingcindezi edingekayo iphindwe kabili.
I-Power ultrasound iyithuluzi eyaziwa futhi eqinisekisiwe yokuguqulwa / ukusebenza kanye nokusabalalisa kwama-micro- nano-particles njenge-silika. Ngenxa yemifino yayo kanye nemiphumela ethembekile kakhulu ekusetshenzisweni kwezinhlayiyana, i-sonication iyindlela ekhethiwe yokukhiqiza izinhlayiya ezisetshenziswayo (isib. Izinhlayiya ze-core-shell). I-ultrasound yamandla idala ukudlidliza, i-cavitation iphinde ikhiphe amandla ekuphenduleni kwe-sonochemical. Ngakho-ke, ama-ultrasonicators aphezulu asetshenziselwa ngempumelelo ama-particle treatments kufaka phakathi ukusebenza / ukuguqulwa, Ukunciphisa Usayizi & ukuhlakazeka kanye Ukusebenzisana (isib imizila ye-sol-gel).
Izinzuzo ze-ultrasonic izinhlayiyana ukuguqulwa / ukusebenza
Ukulawula okulula phezu kobukhulu bezinhlayiyana nokuguqulwa
ukulawula okugcwele phezu kwemigomo yenqubo
esebenzayo kusukela ezincane kakhulu kuya kumakhulu amakhulu
ephephile, umsebenzisi- & ukuphathwa kwemvelo
Amakholomu we-HPLC aphethwe kakhulu nge-silika
Uhlelo lwe-industrial ultrasonic lwezinqubo ezifakiwe
Ultrasonic Ukulungiselela Core-Shell Silica Izingxenye
I-co-shell shell i-silika izinhlayiya (umgogodla oqinile ngegobolondo eliqothulayo noma obunzima kakhulu) sekuye kwasetshenziselwa ukuhlukaniswa ngokuphumelelayo nokuhamba okusheshayo nokucindezela emuva okuphansi. Izinzuzo zikhona emgodini wazo oqinile kanye negobolondo elikhukhumezayo: I-particle ephelele-shell-shell iyakha inhlayiya enkulu futhi ivumela ukuthi isebenze i-HPLC engcindezini engezansi emuva ngenkathi igobolondo elinesibindi neqinzana elincane eliqinile ngokwayo linikeza indawo ephakeme yokuhlukanisa inqubo. Izinzuzo zokusebenzisa izinhlayiya ze-shell-shell njengempahla yokupakisha yamakholomu we-HPLC yilokho ivolumu elincane le-pore linciphisa ivolumu okwamanje yokwandisa kusuka kwe-longitudinal diffusion. Ubukhulu bezinhlayiyana nobukhulu begobolondo elikhukhumezayo banethonya eliqondile kwimingcele yokuhlukanisa. (bheka uHeses et al. 2014)
Izinto zokupakisha ezisetshenziswa kakhulu kunazo zonke zamakholomu aqoqiwe e-HPLC ziyi-microspheres evamile ye-silica. Izinhlayiya ze-shell-core ezisetshenziselwa i-chromatography zivame ukwenziwa nge-silica futhi, kodwa zinomgogodla oqinile kanye negobolondo elikhukhumezayo. Izinhlayiya ze-silika ze-silica njengoba zisetshenziselwa izinhlelo zokusebenza ze-chromatographic nazo ziyaziwa njenge-fused-core, core core noma partic particly ezingenangqondo.
Ama-silica gels zingenziwa zokwenziwa nge-sonochemical sol-gel umzila. I-silica gels iyisendlalelo esincane kakhulu esetshenziselwa ukuhlukaniswa kwemisebenzi esebenzayo nge-chromatography encane engqimba (TLC).
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana nomzila we-sonochemical wezinqubo ze-sol-gel!
I-ultrasonic synthesis (i-sono-synthesis) ingasetshenziswa kalula kwi-synthesis yamanye ama-silika asekelwayo noma i-metal oxides, njenge-TiO2/ SiO2, CuO / SiO2, Pt / SiO2, I-Au / SiO2 kanye nezinye eziningi, futhi ayisetshenziselwa ukuguqulwa kwe-silica kuphela ye-cartridges ye-chromatographic, kodwa futhi isetshenziselwa ukusebenzisana okuhlukahlukene kwezimboni zezimboni.
Ukusabalalisa okuhle nokukhululeka kwezinhlayiya kubaluleke kakhulu ukuthola ukusebenza okugcwele kwale ndaba. Ngakho-ke, ukwenzela ukuhlukaniswa okuphezulu kwe-monodisperse izinhlayiya ze-silica ezinama-diameter amancane zisetshenziswa njengezinhlayiya zokupakisha. I-Sonication iye yafakazelwa ukuthi iyasebenza kakhulu ekusakazweni kwe-silika kunezinye izindlela zokuxuba eziphezulu.
Isakhiwo esingezansi sibonisa umphumela wokuhlakazeka kwe-ultrasonic we-silika e-fumed emanzini. Izilinganiso zatholakala nge-Malvern Mastersizer 2000.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana nokuhlakazeka kwe-ultrasonic kwe-Silica (i-SiO2)!
I-Ultrasonic disperser UIP1500hdT (1500W)
I-Czaplicki, i-Sylwester (2013): I-Chromatography ku-Bioactivity Ukuhlaziywa Kwezinkampani. Ku: Ikholomu yekholomu, uDkt Dean Martin (Ed.), InTech, DOI: 10.5772 / 55620.
Hayes, uRichard; U-Ahmeda, u-Adham; Edge, Tony; I-Zhang, i-Haifei (2014): Izinhlayiya ze-shell-shell: Ukulungiselela, okuyisisekelo kanye nezinhlelo zokusebenza ekusebenzeni okuphezulu kwe-chromatography yamanzi. J. Chromatogr. I-1357, 2014. 36-52.
I-Sharma, i-SD; Singh, Shailandra (2013): I-Synthesis ne-Characterzation ye-Zirconia ephezulu kakhulu esebenza kahle nge-Silica: I-Core-Shell Catalyst nge-Ultrasonic Irradiation. I-American Journal of Chemistry 3 (4), 2013. 96-104
I-Chromatography ingachazwa njengenqubo yokudlulisa okuningi ehilela ukuhlunga. I-chromatography yamanzi ephezulu esebenza kahle (ngaphambili eyayaziwa nangokuthi i-chromatography yomsindo ophezulu) yindlela yokuhlaziya lapho ingxenye ngayinye yenhlanganisela ingahlukaniswa khona, ikhonjwe futhi ifunwe. Ngaphandle kwalokho, i-chromatography yesikhangiso esilinganiselwe esetshenziselwa ukuhlanzwa kwamaqoqo amakhulu okubonakalayo esikalini sokukhiqiza. Izihlalutyi ezivamile ziyi-molecule ephilayo, i-biomolecules, ions, nama-polymers.
Isimiso sokuhlukaniswa kwe-HPLC sincike esigabeni esithatha (amanzi, izixazululo eziphilayo, njll) ukuba zidluliselwe esiteshini esimisiwe (ukufakwa kwe-particulate silica, monoliths, njll) kukholomu. Lokhu kusho ukuthi i-solvent liquid solvent, equkethe ama-dissolved compounds (isampula yesampuli), iphoswa ngekholomu egcwele izinto ezibonakalayo zezikhangiso (isib. Ukuguqulwa kwama-silica particles). Njengoba ingxenye ngayinye kulesampula ikhuluma ngokungafani nalokho okuqukethwe kwe-adsorbent, amazinga okugeleza wezingxenye ezahlukene ahluka futhi aholela ngaleyo ndlela ukuhlukaniswa kwezingxenye njengoba bephuma kukholomu. Ukwakhiwa nokushisa kwesigaba seselula kuyimingcele ebaluleke kakhulu yenqubo yokuhlukanisa ethonya ukusebenzisana okwenzeka phakathi kwezakhi zesampula kanye ne-adsorbent. Ukuhlukaniswa kusekelwe ekuhlukaneni kwamakhemikhali kuya kwesigaba esisimweni nesiselula.
Imiphumela yokuhlaziywa kwe-HPLC iboniswa njenge-chromatogram. I-chromatogram ingumdwebo womabili amabili kanye ne-ordinate (y-axis) enikeza ukuhlushwa ngokwempendulo yempendulo kanye ne-abscissa (x-axis) imelela isikhathi.
I-Silica Particles ye-cartridges elayishiwe
Izinhlayiya ze-silika zezinhlelo zokusebenza ze-chromatographic zisekelwe kuma-polymers ase-synthetic polymers. Ngokuyinhloko, zenziwe nge-tetraethoxysilane eziyingxenye ye-hydrolysed ibe yi-polyethoxysiloxanes ukuze zenze uketshezi oluvuthiwe olungafakwa emulsified engxenyeni yamanzi ethanol ngaphansi kwe-sonication eqhubekayo. Ukuqhuma kwe-ultrasonic kudala izinhlayiya eziyindilinga, eziguqulwa zibe yi-silica hydrogels ngokusebenzisa ukuvuthwa kwe-hydrolytic eyenziwe nge-catalytically (eyaziwa ngokuthi 'Unger' indlela). Ukunciphisa i-hydrolytic kubangela ukuxubana okubanzi ngezinhlobo ze-silanol. Emva kwalokho, ama-hydrogel spheres ahlanganisiwe ukuze akhiqize i-xerogel. Usayizi wezinhlayiya kanye nosayizi we-pore we-porous silica xerogel kakhului-sol-gel) zithonywa yi-pH value, izinga lokushisa, i-catalyst esebenzayo kanye ne-solvents kanye ne-silica sol concentration.
Okungenalutho ngokumelene nama-Porous Particles
Womabili ama-microspheres angama-nonporous and porous silica asetshenziselwa njengesigaba esisimweni samakholomu eHPLC. Ngezinhlayiya ezincane ezingenayo i-nonporous, ukuhlukaniswa kwenzeka endaweni yezinhlayiyana futhi ukukhuliswa kwebhande kuncishiswa ngenxa yendlela encane yokusabalalisa, ngaleyo ndlela kuvela ukudluliselwa okukhulu ngokushesha. Kodwa-ke, indawo ephansi iholela emiphumeleni eminingi engalingani, ngoba ukugcina, isikhathi sokugcina, ukukhetha futhi ngakho-ke ukuxazulula kunqunyelwe. Umthamo wokulayisha kuyisici esibalulekile, futhi. Ama-microrospheres ane-porous anikeza ngaphandle kwe-particle surface ngaphezu kwe-pore surface, enikeza indawo engaphezulu yokuxhumana ukuze ihlangane nabahlaziyi. Ukuqinisekisa ukuthutha okwanele ngesikhathi sokuhlukaniswa kwesigaba samakhemikhali, ubukhulu be-pore kumele bube nobukhulu obungaphezu kuka ~ ~ 7nm. Ukuhlukanisa ama-biomolecules amakhulu, ama-pores angama-100nm adingekayo ukuze azuze ukuhlukana okuphumelelayo.